Cudurka Corona: Muddo intee la eg ayay igu qaadan kartaa inaan ka bogsado?
Wednesday May 20, 2020 - 15:40:28 in Wararka by Burco Staf
Covid-19 wuxuu soo baxay dhammaadka sanadkii 2019, balse durbawa waxa jira calaamado muujinayo in bukaanada qaar uu waqti ku qaato inay ka caafimadan.
Inaad cudurka ka caafimaado waxay ku xirantahay sida uu kuu qabtay maalmihii ugu horeysay ee uu kugu dhacay. Dadka qaar si dhaqse leh ayay uga fiyoobaadaan halka kuwa qaarna uu ku reebo raad caafimaad oo joogta ah.
Da'ada, Jinsiga iyo xaaladaha kale ee dhanka caafimaadka ayaa dhamaantood waxay sabab u noqon karaan inuu si daran qofka ula xanuunsado Covid-19 iyo in kale.
Mar haddii daweyntaada ay wakhti badan qaadato, waa astaan muujineysa in soo kabashadaadana ay wakhti badan qaadan karto.
Maxaa Dhacaya haddii cudurka calaamadiihiisa ay yihiin kuwa sahlan?
Badanaa dadka uu ku dhaco cudurka Covid-19 waxay isku arkaan calaamadaha waawey sida qufac ama qandho. Balse sidoo kale waxaa laga yabaa inay isku arkaan jir xanuun,daal iyo madax xanuun
Marka ugu horeysa qufaca waa qaleyl, balse muddo kadib dadka qaar, qufaca waxaa la socdo xaaqo wadata unugyada qaar oo uu feyrasku dilay.
Astamahaas waxa lagu daaweeyaa inu bukaanku nasto, cabo biyo badan, xanuun baabiyaha paracetamol -kana cuno.
Qandhada waa inay kaa yarataa qiyaastii todobaad ka dib, inkastoo laga yaabo inuu qufac kugu raago. Qiyaas ay sameysay WHO ayaa lagu sheegay in inaad ka caafimaado cudurka ay qaadan karto ilaa labo todobaad.
Dadka qaar cudurka wuxuu u qaban karaa si daran, arrintana waxay dhici kartaa inta u dhaxeyso 7 ila 10 bari markii uu kugu dhaco caabuqa.
Xalaadaada si deg deg ah ayay isku badeli kartaa iyadoo qofku ay nefsashada ku adkaato , sambabadana ay bararraan. Dadka qar waxaa laga yaabaa inay u bahdaan in lagu xiro qalab ka caawiya neefsashada.
Maxaa dhacaya haddii aan u baahdo daryeel caafimaad oo deg deg ah
Hay'adda Caafimaadka Adduunka waxay ku qiyaastay in hal ka mid ah 20-kii qof oo cudurka uu ku dhaco uu u baahanayo daryeel caafimad oo deg deg ah, kaas oo laga yaabo inu u baahdo in lagu xiro qalab neefsashada ka caawiya.
Wakhti ayay qaadan kartaa in uu caafimaado qofka la dhigo qeybta xaalada deg deg ah. Xitaa qofka haddii qeybtaasi laga soo saaro, inta uusan gurigiisa aadin waxaa lagu warjinayaa qeybta dadka xaaladoda caafimaad aysan liidanin la seexiya ee isbitaalka .
Ma laga yabaa in saameyn xilli fog ah uu caafimaadkeyga ku yeesho Corona?
Taasi ma xaqiijin karno maadaama aysan jirin daraasad ku saabsan arrintaas oo la soo saaray.
Waxa jira suurtagalnimada ah in xitaa dadka uu sida fudud u qabto cudurka uu ku reebi karo saameyn waqti qaadatao- sida in uu muddo dheer dareemo daal joogta ah.
Meeqa qof ayaa ka caafimaaday cudurka?
In la helo tiro sax ah wey adagtahay, balse 15-kii April, jaamacada Johns Hopkins waxay daabacday in 500,000 oo ka mid ah labadii milyan ee cudurka uu ku dhacay ay ka caafimaadeen Covid-19
Balse dowladaha siyaabo kala duwan ayey u diiwaan gelinayaan, qaarkood maba daabacayaan tirada dadka caafimaadday iyo kuwa sida fudud uu ugu dhacay cudurka.
Image captionBukaan markii laga daweeyay xanuunka ku sujuuday dibeda isbitaal ku yaalla dalka Morocco
Mar kale muu igu dhaci karaa cudurka Covid-19?
Waxaa jira warar la'isla dhaxmarayo balse aan caddeyn loo haynin oo sheegaya in bukaandaa marka ay soo boksadaan uu jirkooda iska caabin kara inuu fayriska mar kale ku dhaca.
Sidaas oo ay tahay waxa jira warar la xiriira in cudurka uu labo mar soo ritay bukaanada qaar walow dadka qaar ay ku doodayaan in laga yaabaa in baaritaan dhameystiran aan lagu sameynin ka hor inta aan lagu wargeliin inuu Corona jirkooda ka baxay.
In la fahmo qaabka uu difaaca jirka jawaab uga bixiyo coronavirus marka ii boogsoo ka dib iyo waxtarka uu yeelan akra talaalka ayaa ah su'aalo muhiim ah oo ay seynisyahannadu hadda ku mashquulsan yihiin
La wadaag qodobkanFaahfaahin